अनशनको सातौँ दिन,बोल्नै नसक्ने अवस्थामा प्रा.डा. केसी :: सन्जिब बगाले :: Setopati
अनशनको सातौँ दिन,बोल्नै नसक्ने अवस्थामा प्रा.डा. केसी
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर अनशन बसेका प्रा.डा.गोविन्द केसी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अनशनको छैटौँ दिनसम्म शुभेच्छुकमाझ बोलचाल गरेका केसी सातौँ दिन (बुधबार) देखि बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।
शरीरका सबै मांसपेशी दुख्ने, कटकट खाने, टाउको र छाती दुख्ने समस्या बढेपछि केसी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन् । केसीको शरीरमा पानीको मात्रा कम भएपछि २४ घन्टाको अवधिमा ६ वटा स्लाइन पानी दिन थालिएको छ ।
सहयोगीका अनुसार उनलाई बुधबार दिउँसोबाट अत्यधिक छाती दुखेको छ । जसले श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या भएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले केसीलाई नबोल्न सुझाब दिएका छन् ।
संयोजक उपाध्यायले समिति गठन भएको जानकारी पाए पनि काम सुरु नभएको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले केसीका मागका विषयमा छलफल र गृहकार्य गरिरहेको होला,’ उनले भने, ‘केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’ चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबार संसदमा पेस हुने अवस्थामा थियो । तर, कार्यसूचीमा परेन ।‘‘हामीले विधेयक पेस होला भनेर बुधबार वार्ता गरेनौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्ली रिमालले भने, ‘विधेयक पेस भएन, हामी बिहीबारबाटै केसी पक्षसँग वार्ता सुरु गर्नेछौँ ।’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २६, २०७४, ०७:३७:५१